OTU ESI EME KA NHICHAPU NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Kwado ntọala ụda na Windows 10
UAC bụ ọrụ nchịkwa nke edepụtara iji nye nchebe ọzọ mgbe ị na-arụ ọrụ ndị dị ize ndụ na kọmputa. Ma ọ bụghị ndị ọrụ niile na-eche nchedo dị otú ahụ ziri ezi ma chọọ iwepu ya. Anyị ga-aghọta otú e si eme nke a na PC na-agba Windows 7.
Hụkwa: Na-agbanyụ UAC na Windows 10
Ọrụ ndị UAC na-achịkwa gụnyere ịmepụta ụfọdụ ụlọ ọrụ usoro (nchịkọta akụkọ, wdg), ngwa ndị ọzọ, ntinye nke ngwanrọ ọhụrụ, yana ihe ọ bụla maka onye nchịkwa. N'okwu a, UAC na-amalite ịmepe windo nke ịchọrọ ka onye ọrụ ahụ kwenye na ị ga-arụ ọrụ ụfọdụ site na ịpị bọtịnụ "Ee". Nke a na-enye gị ohere ichebe PC gị site na omume ndị a na-achịkwaghị achịkwa nke nje virus ma ọ bụ ndị omempụ. Ma ụfọdụ ndị ọkachamara na-eleba anya n'ụdị nlekọta dị otú ahụ na-enweghị isi, na mmepụta nkwenye dị oke egwu. Ya mere, ha chọrọ iwepu ịdọ aka ná ntị nche. Anyị na-akọwa ụzọ dịgasị iche iche iji rụọ ọrụ a.
E nwere ụzọ dị iche iche maka igbochi UAC, ma ịkwesịrị ịghọta na onye ọ bụla n'ime ha dị irè naanị mgbe onye ọrụ na-eme ha site n'ịbanye na usoro ahụ n'okpuru akaụntụ nwere ikike nchịkwa.
Usoro 1: Debe ihe ndekọ
Ụzọ kachasị mfe iji gbanyụọ oghere UAC bụ site na ịmepụta window ntọala akaụntụ onye ọrụ. N'otu oge ahụ, enwere nhọrọ maka ịmepe ngwá ọrụ a.
Mbụ, ịnwere ike ime mgbanwe site na akara ngosi nke profaịlụ gị na menu "Malite". Pịa "Malite"wee pịa akara ngosi ahụ dị n'elu, nke ga-adị na akụkụ aka nri nke akụkụ ahụ.
Na windo meghere pịa akara "Gbanwee oge ...".
Na-esote, gaa na nchịkọta mgbanwe nke na-ezipụ ozi gbasara mgbanwe ndị a na PC. Wụ ya na njedebe ala - "Kpacharala Anya".
Megharia PC. Oge ọzọ ị gbanwere ọdịdị nke window windo UAC ga-enwe nkwarụ.
Ọ dịkwa mkpa iji gbanyụọ window windo a ga-emeghe "Ogwe njikwa".
Pịa "Malite". Bugharịa na "Ogwe njikwa".
Gaa ihe "System na Nchebe".
Na ngọngọ "Ogwe Nkwado" pịa na "Gbanwee oge ...".
Ntọala ntọala ga-amalite, ebe ị ga-eme ihe niile manipụtara na mbụ.
Nhọrọ ọzọ ị ga-aga na windo ntọala bụ site na ebe ọchụchọ na menu "Malite".
Pịa "Malite". Na mpaghara ọchụchọ, denye ihe na-esonụ:
Kiet ke otu utịp ke ndutịm "Ogwe njikwa" ga-apụta "Gbanwee oge ...". Pịa ya.
Mpempe window nke mepere emepe ga-emeghe ebe ịkwesịrị ịme otu ihe ahụ.
Nhọrọ ọzọ iji gaa na ntọala nke ihe ọmụmụ a na-amụ na isiokwu a sitere na windo "Nhazi usoro".
Iji banye "Nhazi usoro"jiri ngwá ọrụ ahụ Gbaa ọsọ. Kpọọ ya site na ide Nweta + R. Tinye okwu:
Na windo nhazi mmalite, gaa na "Ọrụ".
Na ndepụta nke ngwaọrụ ngwaọrụ dị iche iche, chọta aha ahụ "Ịmepụta njikwa akaụntụ". Họrọ ya wee pịa "Gbaa ọsọ".
Mwube ntọala ga-amalite, ebe ị nwere ike ime ka anyị mara mmachi.
N'ikpeazụ, ịnwere ike ịkwaga ngwá ọrụ ahụ site na itinye iwu ahụ na windo ozugbo Gbaa ọsọ.
Kpọọ Gbaa ọsọ (Nweta + R). Tinye:
Mmalite windo akaụntụ ahụ amalite, ebe ị ga-arụ ọrụ ndị akọwapụtara n'elu.
Ị nwere ike gbanyụọ ngwá ọrụ njikwa akaụntụ onye ọrụ site na itinye iwu ahụ n'ime "Iwu Iwu"nke ahụ na-eji ikike nhazi.
Pịa "Malite". Gaa "Mmemme niile".
Gaa na ndekọ ahụ "Ụdị".
N'ime ndepụta nke ihe, pịa bọtịnụ òké aka nri (PKM) n'aha "Iwu Iwu". Site na ndepụta nke gosipụtara, pịa "Na-agba ọsọ dị ka onye nlekọta".
Ohere "Iwu iwu" arụ ọrụ. Tinye okwu na-esonụ:
Mgbe egosiri ihe edere n'ime "Iwu iwu", na-ekwu na arụ ọrụ arụcharala nke ọma, malitegharịa ngwaọrụ ahụ. Iji nweta PC, ị gaghị achọta windo UAC na-apụta mgbe ị na-agbalị ịmalite ngwanrọ ahụ.
Usoro 3: Editor Editor
I nwekwara ike iwepu UAC site na ime mgbanwe na ndekọ ahụ site na iji nchịkọta ya.
Iji mee ka window ahụ rụọ ọrụ Editor Editor jiri ngwá ọrụ ahụ Gbaa ọsọ. Kpọọ ya na iji Nweta + R. Tinye:
Editor Editor emeghe. N'akụkụ aka ekpe ya bụ ngwaọrụ maka ịnyagharị igodo ndekọ, na-enye ya n'ụdị akwụkwọ ndekọ. Ọ bụrụ na ezoro ezo ndị a ezoro ezo, pịa ihe odide "Kọmputa".
Mgbe ngalaba gosipụtara, pịa na nchekwa "HKEY_LOCAL_MACHINE" ma "Ngwaọrụ".
Gaa na ngalaba "Microsoft".
Wee pịa ibe ya "Windows" ma "CurrentVersion".
N'ikpeazụ, gafee alaka "Atumatu" ma "Usoro". Ịhọrọ ngalaba ikpeazụ, gaa n'akụkụ aka nri. "Editor". Lee ebe ahụ maka ebe a kpọrọ "EnableLUA". Ọ bụrụ n'ọhịa "Uru"nke na-ezo aka na ya, a setịpụrụ nọmba ahụ "1"mgbe nke a pụtara na a kwadoro UAC. Anyị ga-agbanwe uru a "0".
Iji dezie oke, pịa aha. "EnableLUA" PKM. Họrọ site na listi "Gbanwee".
Na windo na-agba ọsọ na mpaghara ahụ "Uru" tinye "0". Pịa "OK".
Dị ka anyị na-ahụ, ugbu a na Editor Editor na-emegide ihe ndekọ ahụ "EnableLUA" a gosipụtara uru "0". Iji tinye ukpụhọde ka UAC kwụsịrị kpamkpam, ị ga-amalitegharịa PC.
Dịka ị pụrụ ịhụ, na Windows 7 enwere ụzọ atọ dị mkpa iji kwụsị ọrụ UAC. Site na nnukwu, nke ọ bụla n'ime nhọrọ ndị a bụ otu. Ma tupu i jiri otu n'ime ha, chee echiche nke ọma ma ọrụ a ọ na-egbochi gị nke ukwuu, ebe ọ bụ na ịkụda ya ga-eme ka ọ ghara imerụ nchebe nke usoro ahụ site na mmemme ọjọọ na ndị omempụ. Ya mere, a na-atụ aro na ọ ga-eme ka arụ ọrụ nke ọrụ a ruo oge ole na ole maka oge arụmọrụ nke ụfọdụ ọrụ, mana ọ gaghị adịgide adịgide.